true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 1 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
Ukusinda yisenzo sokuqhubeka nokuba khona noma sokuphila.
Umuntu angaphila noma anganqotshwa (ahluleke noma afe) kuya ngekhono lakhe lokuthola nokubamba imali, impahla noma izinto azidingayo ukuze aphile.
Ukuphepha komsebenzi omuhle, ngokwesibonelo, kusho isiqiniseko esithile sokuthi uzosinda kahle. Indoda eyenza impilo enhle ingakwazi ukuthenga izingubo ezingcono ngokulwa nesimo sezulu, ikhaya elingcono, ukunakekelwa kwezokwelapha yona nomndeni wayo, izinto zokuhamba ezinhle nokuhlonishwa kwabangane bayo. Zonke lezi zinto zisiza ukusinda kwakhe.
Ukuziphatha isifundo sokuziphatha okulungile nokungalungile kanye nezinqumo ezithile umuntu azenzayo empilweni yakhe noma ekusebenzelaneni nabanye abantu.
Izimiso zokuziphatha zibuye zisho isenzo umuntu asithatha ngokwakhe ukufinyelela ezingeni eliphakeme kakhulu lokusinda yena kanye nabanye.
Wonke umuntu unekhono lokusinda. Ukufeza kahle kangakanani lokhu kuncike ekutheni uzisebenzisa kanjani kahle izimiso zokuziphatha empilweni yakhe.
Izimiso zokuziphatha zikhona kumuntu uqobo lwakhe.
Kukhona ukunika umuntu indlela yokwandisa ukusinda kwakhe futhi azikhulule kwi-dwinding spiral (okuqhubekayo ngokuba kubi) kwezwe lanamuhla.
Isihloko sonke sokuziphatha ngesinye, lapho umphakathi usesimweni okuso manje, sesicishe salahleka.
Ukuziphatha empeleni kusebenzela ebangeni eliphakeme kakhulu lokusinda kumuntu, umndeni wakhe, amaqembu ayingxenye yakhe, Isintu nazo zonke ezinye izingxenye zempilo.
Isixazululo esimpofu kunazo zonke kungaba yileso sixazululo esilethe ukulimala okukhulu kuzo zonke izingxenye zempilo yakho.
Izimiso zokuziphatha yizenzo umuntu azithathela zona ukuletha ukusinda okungcono kakhulu ukuze kusinde yena nabanye. Izenzo zokuziphatha ziyizenzo zokusinda. Ngaphandle kokusebenzisa izimiso zokuziphatha asisindi.